चट्टानको ढिस्को डुंगामा खस्दा एकै पटक यति धेरैको मृत्यु! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > चट्टानको ढिस्को डुंगामा खस्दा एकै पटक यति धेरैको मृत्यु!
एजेन्सी । ब्राजिलको एउटा तालमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् । घटनामा २० जना बेपत्ता भएका छन् ।
ब्राजिलको दक्षिणपुर्वी क्षेत्रको मिनास गेराइस राज्यको तालमा ४७ यात्रु सहितको डुंगामाथि चट्टान सहितको ढिस्को खस्दा दूर्घटना भएको हो । तालको छेउमा रहेको चट्टान दुई चिरा भई डुंगामाथि खसेको जनाइएको छ । ब्राजिलमा केही दिनदेखि जारी लगातार बर्षाका कारण चट्टान खसेको अनुमान गरिएको छ । तालमा खसेको चट्टानमा ३ वटा डुंगा ठोक्किएका थिए ।
विश्वकै धनी इलोन मस्कसँग
विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति इलोन मस्क अब भौतिक सम्पत्तिबिहिन बनेका छन्। अर्थात् मस्कसँग अब न कुनै घर छ, न एक चिम्टी माटो नै! विद्युतीय सवारी उत्पादकमा सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी टेस्लाका साथै अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी काम गर्दै आएको कम्पनी स्पेस एक्सका संस्थापक मस्कले गतवर्ष नै आफूलाई सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। भौतिक सम्पत्तिले ठुला लक्ष्यबाट आफूलाई विचलित गर्ने भन्दै यसबाट छुटकारा चाहेको उनले बताएका थिए।
मस्कले उनको नाममा बाँकी रहेको सिलिकन भ्याली (क्यालिफोर्नियास्थित) अन्तिम हवेली पनि बिक्री गरेका छन्। त्यससँगै उनले सो घरबारे उल्लेख गर्दै लेखेका छन् – ‘त्यो कुनै ठूलो परिवारका लागि ठिक थियो जुन अब त्यहाँ बस्न जाँदैछन्। यो ठाउँ विशेष छ।’
मार्समा स्पेस एक्स पुर्‍याउनेजस्ता ठुला लक्ष्यहरुमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सन् २०२० मा उनले आफ्ना सम्पूर्ण घरजग्गा लगायतबाट छुटकारा लिएर चाहेको बताएका थिए। सोही क्रममा यसै वर्षको मध्यतिर उनले १० बेडरुमको १४८६ वर्गमिटरको एउटा बङ्ग्लोबाहेक अरु सबै सम्‍पत्तिहरु बेचिसकेको सार्वजनिक गरेका थिए। बाँकी सोही एउटा प्रोपर्टी पनि अहिले उनले ३ करोड डलरमा बिक्री गरेका हुन्।
आमाछोरीसँग बाुब र ज्वाईले सँगै….
हेलिकप्टर दुर्घटना, सबार सबैको मृत्यु